के निल आर्मस्ट्रङ चन्द्रमामा पुगेको कुरा काल्पनिक थियो? « AayoMail
के निल आर्मस्ट्रङ चन्द्रमामा पुगेको कुरा काल्पनिक थियो?
सन् १९६९ को जुलाई २०। ५२ वर्षअघि आजैका दिन दुई अमेरिकी अन्तरिक्षयात्रीहरु निल आर्मस्ट्रङ र बज एल्ड्रिनले चन्द्रमामा पाइला टेकेका थिए। त्यो नै चन्द्रमामा पहिलो मानव पाइला थियो। उक्त घटनालाई विश्वभरका ६५ करोड मानिसहरुले टेलिभिजनमार्फत् प्रत्यक्ष रुपमा हेरेका थिए।
तर, यो घटनालाई धेरै ‘कन्सपिरेसी थ्योरिस्ट’ हरुले काल्पनिक घटनाका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। उनीहरु तत्कालीन सोभियतसँघसँगको अन्तरिक्ष प्रतिस्पर्धामा अगाडि देखिन अमेरिकाकै एक मरुभूमि या हलिउडको सेटमा यो दृश्य खिचिएको दाबी गर्छन्।
सबैभन्दा पहिले अमेरिकी नेभी अफिसर बिल केसिंगले सन् १९७६ मा चन्द्रमामा मानिस पुगेको विषयमा शंका व्यक्त गर्दै पम्प्लेट प्रकाशित गरे–‘वि नेभर वेन्ट टु द मुन : अमेरिकाज थर्टि बिलियन डलर स्वीन्डल’। त्यसमा उनले चन्द्रमामा मानिस अवतरण गर्ने सम्भावना ०.००१७ प्रतिशतमात्र रहेको दाबी गरे।
केसिंग तिनै व्यक्ति थिए, जो सन् १९५६ देखि १९६३ सम्म अमेरिकी अन्तरिक्ष कार्यक्रममा काम गरेका थिथ्ए। उनी ‘रकेटडाइन’ नामक कम्पनीका कर्मचारी थिए, जसले स्याटर्न पाँचौ रकेट इन्जिनको डिजाइन गरेको थियो।
सन् १९८० मा फ्ल्याट अर्थ सोसाइटी नामक संस्थाले पनि नासाले चन्द्रमामा नक्कली अवतरण गरेको आरोप लगायो। अवतरणका दृश्यहरु कार्टुन निर्माता कम्पनी वाल्ट डिस्नेको लगानीमा हलिउडमा खिचिएको उक्त संस्थाको आरोप थियो। जसको लेखन आर्थर सी क्लार्क र निर्देशक स्ट्यान्ली कुब्रिक रहेको दाबी संस्थाको छ।
सन् १९७० को जुलाईमा गरिएको एउटा अनुसन्धानमा ३० प्रतिशत अमेरिकीहरुले अपोलो ११ मिसन काल्पनिक भएको बताएका थिए। ७० को दशकमा रिलिज भएको मंगलग्रहको मिसनमा आधारित चलचित्र ‘क्याप्रिकन वान’ का कारण त अमेरिकीहरु अपोलो मिसन फेक भएकोमा विश्वस्त थिए। अझै ६ प्रतिशत अमेरिकीहरु एपोलो ११ मिसनका अन्तरिक्षयात्रीहरु कहिल्यै चन्द्रमामा पाइला नटेकेकोमा विश्वास गर्छन्।
तर अमेरिकी प्रतिनिधिसभाको संसदीय निर्देशक आर्ट हार्मन यस्ता कन्सपिरेसी थिओरिस्टले अमेरिकी समाजलाई विभाजन गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै चन्द्रमामा मानव पाइला परेको कुरा सत्य रहको बताउँछन्।
एकपटक एकजना थिओरिस्टले अन्तरिक्षयात्री बज एल्ड्रिनलाई झुटा भनेका थिए। त्यतिखेर एल्ड्रिनले उनलाई मुखमा एक मुक्का दिएका थिए।
चन्द्रमामा मानव अवतरण काल्पनिक भनेर दाबी गर्नेहरुले विभिन्न विषय औंल्याउने गरेका छन्। जसमा एक प्रमुख हो–चन्द्रमाको आकाशमा तारा देखिँदैनन्।
सार्वजनिक भएको तस्बिरमा देखिएको आकाशमा तारा देखिएका छैनन्। यो नै काल्पनिक भएको पुष्टि गर्ने आधार भएको तर्क उनीहरुले गर्ने गरेका छन्। तर नासाले आकाशमा तारा भएको तर तस्बिर खिच्दा फोकस अन्तरिक्षयात्री भएकाले तारा नदेखिएको दाबी गरेको छ।
यस्तै, कन्सपिरेसी थिओरिस्टहरुले दाबी गर्ने अर्को तथ्य हो–फर्फराइरहेको झण्डा। चन्द्रमामा हावा नहुने भएकाले त्यहाँ झण्डा कसरी फर्फराएको भनेर प्रश्न गर्ने गर्छन्। तर झण्डा गाड्ने बेलामा यसको आकार केही बिग्रिएको र त्यही स्वरुपमा गाडिएकाले फर्फराएजस्तो देखिने वैज्ञानिकहरुको दाबी छ।
यस्तै, लाइटको एंगल र रंगमा पनि प्रश्न औंल्याउने गरिन्छ । चन्द्रमाको सतहमा देखिएका प्रकाश र छायाका कारण पनि उक्त दृश्य सुटिङ भएको दाबी थिओरिस्टहरुको छ। तर यथार्थमा त्यतिबेला विभिन्न खालका प्रकाश त्यहाँ उपलब्ध थिए। जस्तो कि सूर्यको किरण, पृथ्वीबाट परावर्तित भएको प्रकाश, चन्द्रमाको सतहबाट आएको प्रकाश, त्यहाँ लगिएको यानको प्रकाश आदि। सोहीकारण प्रकाश यत्रतत्र फैलिएको देखिएको र छाया पनि अस्वाभाविक देखिएको वैज्ञानिकहरुको भनाइ छ।
यस्तै, यानबाट तल झरिरहेका निल आर्मस्ट्रङको तस्बिर कसले लियो भन्ने आशंका गरिन्छ। तर यानमा जडान गरिएको टेलिभिजन क्यामराले उक्त दृश्य लिएको थियो, जसले पृथ्वीमा संकेत पठाएको थियो।
तर जस्तो तर्क आए पनि चन्द्रमामा मानव पुगेको ५ दशक बितिसक्दा पनि त्यो घटना काल्पनिक थियो भनेर अझै दाबी गर्ने गरिएको छ।
विभिन्न वेबसाइटको सहयोगमा